နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေနှင့် ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေနှင့် ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဉီးကျော်တင့်ဆွေ၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဉီးဆက်အောင်နှင့် ရုရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဉီးကိုကိုရှိန်တို့သည် ၁၀-၆-၂၀၁၉ ရက်၊ ၁၆၀၀ နာရီတွင် ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Sergei V. Lavrov နှင့် တွေ့ဆုံ၍ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး၊ ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသို့ ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Mr. Igor Morgulov ၊ အာရှရေးရာဉီးစီးဌာန (၃) မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Mr. Nozdrev Nikolay ၊ အာရှ-ပစိဖိတ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Mr. Alexei Ovchinnikov၊ အာရှရေးရာဉီးစီးဌာန (၃) မှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Mr. Sergei Tolchenov နှင့် ဒုတိယအတွင်းဝန် Mr. Vladimir Egorov တို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။